Nzira yekuwedzera sei nhamba yekunze kwekubatana?
Backlinks inoramba iine zviratidzo zvikuru zvewebhu webhu hwehuni, hunoenderana, uye chiremera. Vanoratidza Google kana vachida kutarisa iyi webhusaiti pa TOP kana kuti kwete. Yakakwirira-yekunze kunze kwenzvimbo inobatanidzwa zvakananga newebsite yako mumigumo yekutsvaga. Zvisinei, hazvisi nyore kuwana juisi yekubatanidza kubva kune maZimbabwe maPirititi makuru kana iwe uri mutsva pamusika weku digital - plumbingconcepts.com. Kune zviduku kana kuti munguva pfupi ichangobva kushandiswa yewebhu, kuvaka backlinks kunogona kuoneka kwakanyanyisa, asi zvose zvinonzi "nyore uye zvishoma" nzira dzinopesana neGoogle mirayiridzo uye dzinogona kukonzera rankings drop. Uyezve, kana iwe ukavaka zvibatanidzwa nenzira inotarisa kuti inoshungurudza injini dzekutsvaga, iwe unotengesa kuwana zvigaro kubva kuGoogle.
Nhasi, tichazotaura pamusoro pebasa rehuwandu hwemashure ekutsvaga kwebhizimusi rekutsvaga uye kutaura nezvemamwe maitiro unogona kuwana zvakanyanya kudiwa jisi juice.
Nei uchida backlinks?
Kazhinji kutaura, backlink apo imwe nyanzvi yewebhu inobatanidza bhagi rako. Kana iyi webhusaiti ine unhu hunoti kune vashandisi uye inoremekedzwa sevane mvumo yekutsvaga injini, hutano hunowanikwa kubva mairi huchaunza kune yako yehutano hutsika hutsika. Zvisinei, kana iwe ukaisa chibatanidza pane spammy, munguva pfupi yapfuura yakarongerwa web site, mukana wako wekutora juisi yekubatanidza yakadzika kwazvo. Izvo zvakanyanya huni hunoendesa kunzvimbo yako, humwe hukuru hutsika yako huchawana kubva kutsvaga injini.
Unofanira kunge uchiziva nezvezvinangwa zvakasiyana-siyana zvekubatanidzwa kwekunze sezvo iwe uchawana mhinduro dzakasiyana kubva kune rumwe rudzi rwemashure. Zvisungo zvinopesana zvichienderana nehuchokwadi kana uri iwe unobatanidza kunze kana kubatanidzwa.
Saka ngatitsanangurire zvimwe zvikomborero zvakaburitswa kumashure kwemasayiti edu:
Backlinks kutumira chitima kunzvimbo yako
kusika mukana wekugadzirwa kwehutano hwakanaka, unowana magwagwa kubva kune dzimwe nzvimbo dzehutori sevashandisi vanoverenga pepa nechisungo chako chengetera pairi kuti uwane mamwe mashoko.
Backlinks inounza simba renzvimbo yako
A backlink inoshanda sevhoti yevamwe mablogi uye inotsvaga kutsvakurudza pamusoro pezita rakanaka uye simba your domain. Iyo inoshumira zvakakwana saiyo brand awareness awareness.
Unonzwisiswa nevamwe vanoita webhusaiti
Paunoisa chibatanidzwa panzvimbo yako inoreva kune imwe nzvimbo, achacherechedza ruzivo urwu kuburikidza nekuongorora software (f. e. Semalt Web Analyzer kana Google Analytics). Iko mukana wakakwana wekuti iwe uwane imwe niche yakabatana yebusika rekushandisa kuti uone nzvimbo yako uye uise hukama hwebhizimisi hwakanaka newe.
Ungawedzera sei nhamba ye backlinks?
Itai chimwe chinhu chakasiyana
Kuti uwane zvinyorwa zvese, unoda kubudisa zvakasiyana uye zvine chokuita. Zvisinei, vese vadzidzisi vepanzvimbo yepamusoro vanogadzira hutano hwehutano, uye iwe unogona kurasikirwa pakati pezvimwe zvikamu. Iwe unogona kuedza kusvika kune yako yepamusoro-volume keywords nehupenyu hwakasiyana zvakanyanya kune vamwe vose. Kana iwe uchikwanisa kupa vateereri vako pane chimwe chinhu chitsva, saka vangangodaro vashandisi vaizogovana pamwe chete nevamwe vema blogger vachava nehanya nezvebasa rako.
Kubatanidza kune vamwe vanonamata mabhuku ndiyo mukana wakanakisisa wekuwana zvimwe zvikwereti zvakare nokuti unosvika paRadar avo blogs. Apo iwe unosangana kune vamwe vanhu, iwe unowanzowanzowana zvikamu, link, nekugadzirwa kwehupenyu.